Ebba Busch Thor anosiyana | Apg29
Ebba Busch Thor anosiyana
muKristu anogona kuva akasiyana?
Pane dzinongoitika kurambana uye pane sokurwarirwa kurambana. Vose vane simba kwazvo, asi chakaomesesa chinhu Ndinofunga sokurwarirwa.
The Christian Democrats 'mutungamiri vebato kuti kurambana
On Instagram anoti Christian Democratic Party mutungamiri Ebba Busch Thor kuti iye nomurume wake Niklas Busch Thor (footballer muna Uppsala Chikwata Sirius ) achaenda dzavo yoga nzira. Vane vana vaviri pamwe chete.
Kurambana, ndinofunga chinhu kwazvo uye vakawanda havana mufaro. Zviri Kazhinji kwete vakaroorana kuuya voga asi mhuri yose.
The tyisa kurambana
The tyisa kurambana ndiko kana mhuri mbiri vaende zvavo yoga nzira. kurambana akadaro, ndinofunga kunogona kuva kwakaoma chaizvo. Inogona uku pakati netariro uye mwoyo. "Pamwe zvichava zvakanaka ... hapana pamwe kwete ..." Izvi zvinogona kuva oma chaizvo.
The dzinongoitika kurambana
Kunewo yepanyama kurambana. The murume afa. Ichokwadi zvakare marwadzo, asi zvechokwadi. Haisi oscillates pakati tariro uye mwoyo. Kune pfungwa uye unofanira kutama mberi.
Uyezve, pane tariro huru yokudenga munhu akafa akanga aponeswa uye muve vaJesu. Ipapo munhu ari kudenga ikozvino, uye kuruboshwe munhu anoponeswa, kana kana achinge ari kuponeswa, saka pane tariro yokuti vanogona kamwe zvakare kuonekwa rimwe zuva.
Jesu anoda rubatsiro nenyaradzo
Wakambosaina vagura wakasununguka kurambana? Jesu anoda rubatsiro uye kukunyaradza. Ko iwe ndavhiyiwa ane tyisa kurambana? Jesu anoda kukubatsira. All unofanira kuita kutendeukira kuna Jesu.
Zvino mubvunzo: Ko muKristu ave akasiyana? Pano Ndikaisa pfungwa kuti kuponeswa uye vaKristu tisingagari pasi pemurairo asi pasi penyasha, saka zvichava zvishoma chinoshamisa kana kukurukura zvinhu zvaunogona uye asingagoni, zvamunofanira uye haufaniri kuva. Uye vose lagivrare ndinogona kutaura kuti Mosesi vakapiwa Mutemo waMwari waibvumira kurambana!
Mateu 19: 7th Ivo vakati kwaari: Sei akarayira Mosesi kuti ape gwaro rokurambana, uye kumuramba? 8. Iye akati kwavari: Nekuti moyo wako pamusana pokuoma Mozisi wakakutenderai kuramba vakadzi venyu, asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro.
muKristu anogona kuroorwa?